Umthandazo ku-Saint Nicholas wase-Bari woKhuseleko. ? [+ Onamandla]
Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari ukukhuselwa okanye enye injongo sisenzo esivela kumaxesha amandulo kuba ukusukela namhlanje kude kube namhlanje mininzi imimangaliso enxulumene nale ngcwele ingummangaliso.
Kuthiwa ungumlandeli wezinto ezinzima ezibangela ukuba omnye wemimangaliso yokuqala eyaziwayo yayikukunceda utata olihlwempu ngezihlangu okanye iingxowa ezigcwele golide awaziphosa ngefestile ukulungisa imeko yakhe enobunzima kwaye ngenxa yoko unokugcina kwiintombi zakhe zendlela ezibi.
Kungenxa yesi sizathu kunye nezinye izizathu zokuba le nto ingcwele ibe lihlakani esinokusabela kulo ngamaxesha anzima avela kuthi njengabazali, sisazi ukuba ulufumene ezandleni zethu uncedo esiludingayo, nokuba kunzima kangakanani. imeko okanye ukuba mkhulu kangakanani ummangaliso ofunekayo.
1 Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari Wayengubani uSanta Nicholas waseBari?
2 Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari wokhuselo
2.1 Umthandazo kufuneka uthandazwe njani kwi-Nicholas yase Bari ukukhuselwa?
Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari Wayengubani uSanta Nicholas waseBari?
Kuyaziwa ukuba wazalelwa ngaphakathi isifuba sosapho olunamandla olunobutyebi obuninzi. Abazali bakhe babengamaKristu azimiseleyo bamnika imfundo esekelwe kwiinkolelo zobuKristu. Ukususela ebuntwaneni waye waqatshelwa ngokuba nesisa kunye nokuthanda izipho. INicolás yayiyinkedama kwaye ngenxa yoko yafumana ilifa elikhulu kangangokuba andithandabuzi ukunika abo bayifunayo.
Kungenxa yoko le nto namhlanje inani lakhe limelwe ziingqekembe zegolide ezandleni zakhe. Ukongeza, igama lakhe lavelisa intsomi kaSanta Nicholas okanye uSanta Claus oyindoda endala enesisa enika abantwana izipho ngenyanga kaDisemba.
UNicolás de Bari wakhula waba ubhishophu kwaye wagcina imfazwe eyomeleleyo kunye nababeziinkolelo zobuhedeni.
Ngomyalelo ka-Emperor Licinius wayevalelwe ejele apho wakungcungcuthekisa ngokutshisa iindevu zakhe kwaye emva koko uyikhuphe ngokomyalelo woMlawuli uConstantine. Ukusweleka kwakhe kweza ngo-Disemba XNUMX kwaye ukuhlala kwakhe ngoku kuhlala eBari. Waba Ngcwele wokuqala, ongekho kuluhlu njengomfeli-nkolo, ukufumana ukuzinikela kumakholwa avela kwiindawo zonke el mundo oshiye ingcwaba lakhe amabali aliqela emimangaliso awayebanike yona oNgcwele.
Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari wokhuselo
«Hayi usikelele uSanta uNicholas waseBari! athe uThixo wamzukisa ngemimangaliso engenakubalwa, ebonakalalisa intando yakhe, ukuba size kuwe, ngamaxesha anzima obomi bethu, sithembe ukukhuselwa nguwe.
Owu mangaliso wesisa! apho iintsapho, amahlwempu, abagulayo, abarhwebi, abasebenzi, amabanjwa, abantwana, iintombi ezisengozini ziya; Ndicela ngokuthobekileyo ukuba undiphe ubabalo endilulindeleyo kuwe, ndithembele kolona khuseleko lwakho lubaluleke kakhulu, ongasoze walikhanyela kwabo uzinikela kubo, ukuze ubabalwe bububele bakho, sicule kwakhona inceba yeNkosi, kunye nemimangaliso abangcwele bakhe. Uninzi lweProvince Saint Nicholas! sundishiya."
Lo mthandazo kuSanta Nicholas waseBari wokhuselo umangalisayo!
Le Ngcwele ebeyikhusela ngeempahla zayo abo bafuna ikhusi okanye isandla esincedayo isenamandla nanamhlanje ukubonelela ngokhuseleko kumalungu osapho lwethu. Xa useluhambeni, xa uqala usuku olutsha, xa uphuma endlwini kunye nezinye iimpahla ngaphandle kokukhathalela okanye xa imeko inzima I-Santo inokusinika uncedo ngexesha esilifunayo ukubonelela ngokhuseleko kunye nokukhusela.
Oku, njenge yonke imithandazo Kufuneka yenziwe ngokholo kwaye ngokucacileyo. Akukho mfuneko yokuba sifunde umthandazo kuba kunokuba ngamazwi ethu abe ngumthandazo onyanisekileyo. Masikhumbule ukuba iNkosi elungileyo ithembisa kwilizwi layo ukuba nantoni na esiyicelayo sikholwa ukuba siyakufumana.
Ufanele uthandaze njani ku Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari Ngokhuseleko?
Amanye amakholwa acebisa ukwenza i-novenarios, equka ukuthandaza ubusuku obusithoba okanye iintsuku ezithoba, ngokulandelelana.
Oku kuyasebenza kwaye kungasebenza kwezo meko zingathandekiyo kangako apho kufuneka sonyuse ukholo lwethu. Nangona kunjalo, indlela echanekileyo yokwenza oku kunye nawo nawuphi na umthandazo ulandela intshukumisa yentliziyo kunye nokholo kunye nesiqinisekiso sokuba le nto siyicelayo siyakuyinikwa.
Akukho ndlela ichanekileyo, kodwa ke eBhayibhileni sifumanisa ukuba ukholo sisixhobo esingenakuphoswa kuba siso esiqinisekisa ukuba ummangaliso uyakunikwa.
U-St Nicholas nangaliphi na ixesha ebona isidingo uzimisele ukunceda kwaye yile nto ofanele ugxile kuyo.
Mxelele ngengxaki yakho kwaye ucele into oyifunayo, ngokuqinisekileyo izandla zakhe zesisa ziya kukunika into oyicelayo.
Ndiyathemba uyonwabile Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari ukukhusela.
Ukuthandazwa kwe-Helena eNgcwele
IPoderosa Umthandazo kuSanta Katherine weSiena
Umthandazo onamandla kwiNtombi yaseCarmen